ADRC waxay ku socotaa xarunta 'Aging & Disability Resource Center' (ADRC)
Fariinteena waxaan ku qaadaynaa wadada.
Waanu kuu iman doonaa – xataa si dhab ah.
U soo bandhig ADRC kooxdaada, ururkaaga, ama ganacsigaaga.
ADRC on Go waxaa loo sameeyay inay la kulanto dadka waayeelka ah, dadka waaweyn ee naafada ah, iyo daryeelayaashooda halka ay ku nool yihiin, ka dhexeeyaan bulshada, kana shaqeeyaan. Waxaan halkan u nimid inaan ka caawinno dadka aan u adeegno inay ku noolaadaan noloshooda ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
Waxaan haynaa bandhigyo ku saabsan mowduucyo fara badan oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha xubnahaaga iyo shaqaalahaaga. Waxay kuxirantahay mowduuca, soo bandhigayaashu waa isdhaxgal iyo madadaalo, inbadan oo leh kaqeyb galayaasha.
Ka Hortagga Qulqulaya
Weydii qadada & Baro
ADRC on Go waxay ku jiri kartaa qado! Weydii sida aad ugu lamaaneyn karto qadada macaan leh soo bandhigga dookhaaga… xataa adduunkan dalwaddeenna ah!
Ururo badan, kooxo, guryo dhisme, iyo meherado ayaa iska kaashaday ADRC oo ku saabsan GO, ayagoo mowduucyo xiisa leh u keenaya xubnahooda, deganeyaasha, iyo shaqaalahooda.
Waxaa hubaal ah inuu jiri doono mowduuc xiise leh oo aan soo bandhigno. Samee xirmo kuu gaar ah adoo dooranaya mowduucyo aad xiiseyneyso, mid gaaban oo macaan illaa qoto dheer.
Wac ADRC (920) 448-4300 maanta si aad waxbadan uga sii ogaato ADRC-da Go ama / ama aad u sameyso soo bandhig.
ADRC oo ku taal Liiska Go
Daryeel - Helid Taageero iyo wanaag
30 & 60 daqiiqo (1 saac)
Daryeel bixiye waa qof daryeela ama / ama ka walwal qaba xaaska, waalidka, cunugga, walaalka, qaraabada kale, ama saaxiib. Safar kasta oo daryeelku waa mid gaar ah oo wuxuu la yimaadaa farxad iyo caqabado u gaar ah. Baro halka aad ka raadsan karto taageero iyo talooyin ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo kobcin karo wanaaggaaga caafimaad ahaan daryeel-bixiye ahaan.
Go'doon iyo kelinnimo
Kulligeen waxaan ubaahanahay isku xirnaan bulsho si aan horumar u gaarno. Baro sida loo dheereysto wareeggaaga bulsheed oo firfircoon uga dhex shaqeyso bulshada kugu xeeran. Cilmi baaris ayaa muujisay in go'doominta kelinimada iyo kali ahaanta ay waxyeelo u leedahay caafimaadkaaga iyo samaqabkaaga. Ogaanshuhu waa furaha talaabooyinka lagu qaadayo laguna xoojinayo xiriirka aad la leedahay qoyska iyo saaxiibada.
Barnaamijyada Daryeelka Muddada Dheer - Miyaan mudan yahay?
Degmada Brown, waxaa jira labo barnaamij oo ay maal-geliso dowladeed: Daryeelka Qoyska iyo IRIS. Barnaamijyadan waxaa loogu talagalay inay ku siiyaan adeegyada aad ugu baahan tahay inaad ku sii noolaato, ama ku soo noqoto bulshada. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Daryeelka Qoyska iyo IRIS, oo ay ku jiraan shuruudaha u qalmitaanka u qalmitaan iyo dhaqaale.
15, 30 & 60 daqiiqo (1 saac)
Awood siiso naftaada - nagu soo biir casharka macluumaad ee kusaabsan barnaamijyada iyo adeegyada ADRC. Iyada oo ah hay'ad ujeeddo iyo eex la'aan ah, ADRC waxay ku dadaalaysaa inay hagaajiso nolosha dadka waaweyn, dadka waaweyn ee naafada ah, iyo daryeelayaasha iyada oo loo marayo waxbarashada, sahaminta, iyo iskaashiga. Baro sida aan kaaga caawin karno inaad mudnaanta siiso baahiyaha soo kordhaya oo aad dhex mushaaxdo taageerooyinka bulshada.
Sii-socda Daryeel Muddo Dheer ah. Miisaan Fursadahaaga!
Maahan wax aad dhakhso u ah in la qorsheeyo mustaqbalka. Baro sida ADRC ay kaaga caawin karto helitaanka daryeelka aad ugu baahan tahay meesha aad rabto inaad ku noolaato. Baro ikhtiyaarada daryeelka guriga dhexdiisa ah, xulashooyinka guryeynta, daryeelka nasinta, iyo inbadan.
Ka gudubka dugsiga ilaa da 'weyn noqoshada waa inay ahaataa waqti xiiso leh, laakiin waxay noqon kartaa mid xad-dhaaf ah, jahwareer, iyo shaki la'aan, gaar ahaan dadka waaweyn ee naafada ah. Soo ogow sida ADRC kuu caawin karto adiga iyo kuwa aad jeceshahay inaad ku kala wareegeysaan dhammaan xulashooyinkaaga, tallaabo kasta oo jidka ah.
60 - 90 daqiiqo (1 - 1.5 saacadood)
Guudmarka qaybaha kala duwan ee Medicare iyo sharraxaadda ikhtiyaarada caymiska ee kala duwan.
Waxaa loogu talagalay kuwa horeyba ugu jiray Medicare, ama kuwa daryeela qof Medicare ah oo jeclaan lahaa inuu waxbadan barto.
ABCD ee Medicare
120 daqiiqo (2 saacadood)
Bixinta qotada dheer ee Medicare oo ay kujirto dulmarka qaybaha kaladuwan ee Medicare iyo sharraxaadka ikhtiyaarada ceymis ee kala duwan.
Waxaa loogu talagalay dadka qaata iyo kuwa hadda jira, kuwa daryeela, iyo xirfadlayaasha doonaya inay bartaan barnaamijyada Medicare oo dhan.
Medicare - Maareynta dheefahaaga internetka
60 & 90 daqiiqo (1 - 1.5 saacadood)
Dulmir guud si loogu caawiyo dadka qaata Medicare-ka inay fahmaan oo ay isticmaalaan aaladda internetka. Qalabka looga hadlay:
"Maxaa Daboolay" App
Medicare - Isuduwidda waxtarka
Baro muhiimadda ay leedahay sida ay Medicare ula shaqeyso qorshooyinka kale ee caafimaadka iyo daroogada, haddii aad weli shaqeyso ama aad howlgab tahay. Fahmaan sida sharciyadu u go'aaminayaan cidda bixinaysa marka hore, iyadoo kuxiran xaaladdaada, iyo xulashooyinka caymiska.
10 & 15 daqiiqo
Soo bandhigid kooban oo ku saabsan mowduucyo gaar ah oo la xariira Medicare, sida:
Adeegyada Ka Hortagga Kahortaga
Bukaan-socod eegno vs daawasho joogitaan
Waxaa loo habeeyay in si madax-bannaan loo soo bandhigo, ama lala kaashado kuwa ku hadla jadwalka kale. Tixgeli inaad martigeliso soo bandhigid bille ama saddex-biloodle ah. Jadwalka iyo mowduucyada ayaa si gaar ah loogu sameyn karaa kooxdaada ama ururkaaga.
Muddada Diiwaangelinta Furan (OEP) Xilliga Sebtember-Noofembar
30 - 60 daqiiqo (1 saac)
Qof kasta waa inuu dib u eegaa qorshahooda si looga fogaado waxyaabaha la yaab leh sanadka soo socda. Baro sababta, sida, iyo goorta la fiirinayo xulashooyinkaaga caymiska Medicare inta lagu jiro diiwaangelinta furan.
Dulmarka Lambarka Bulshada & Daryeelka Caafimaadka
90 - 120 daqiiqo (1.5 - 2 saacadood)
Guudmarka guud ee Amniga Bulshada iyo Aasaaska Medicare-ka iyo sharaxaada faa'idooyinka kala duwan iyo habka dalabka.
La Xiriira Da 'Dementia'
Daryeelista iyo Waallida
Daryeelka qofka waallida qaba waxay u baahan tahay aqoon, dulqaad, iyo taageero badan. Baro sida loo maro caqabadaha gaarka ah iyo halka caawimaad laga helo.
60 daqiiqo (1 saac)
Muxuu yahay qofka aad jeceshahay ee isku dayaya inuu kula xiriiro habdhaqankooda? Baro waxa ku keeni kara dabeecadaha dadka waallida qaba iyo xeeladaha aad u adeegsan karto inaad ku taageerto.
15 - 30 daqiiqo
Ururka Alzheimers wuxuu sheegaa 110,000 oo degan Wisconsin oo 65 jir ah iyo wixii ka weyn oo qaba cudurka Alzheimers sanadka 2018. Saadaashu waxay muujineysaa in tirada ay ka badan doonto labanlaab (242,000) sanadka 2040.
Baro waxa ay bulshadaada sameyneyso si ay u taageeraan dadka waallida qaba iyo daryeelayaashooda.
Baro aasaaska asaasaqnimada iyo sida ay noqon karto la noolaanshaha cudurka. Beddel habka aad u fikirto, u dhaqanto, ugana hadasho waallida. Noqo Saaxiib Asaasaqa oo fahmaan waxyaabaha aad sameyn karto si aad uga caawiso taageerida qof ka tirsan bulshadaada oo la nool asaasaq. Ficil kasta ayaa tirsanaya!
Waxay noqon kartaa dherer kasta
Dariiqa xiisaha leh ee wax looga barto waallida.
Caafimaadka Maskaxda iyo Waxqabadka
Calaamadaha Digniinta & Caafimaadka Maskaxda
Caadi ma caadi baa? Ma shaybaa in laga walaacaa? Baro calaamadaha digniinta ee waallida iyo muhiimadda ogaanshaha hore iyo sidoo kale waxa ku kordhinaya caafimaadka maskaxda.
Ganacsiyada iyo ururada la macaamila dadweynaha. Tababbarka Purple Angel wuxuu barayaa sida loogu diyaar garoobo oo loogu kalsoonaado inuu soo dhoweeyo una adeego dadka waallida qaba iyo daryeelayaashooda. Shahaadada 'Purple Angel' waxay ka caawin kartaa goobtaadu inay noqoto mid caan ah oo lagu kalsoon yahay bulshada waxayna kordhisaa daacadnimada macaamiisha!
Caafimaad qab, firfircoonow
Marka hore cagaha - Ka hortagida dhicitaanka ee dadka waayeelka ah
30 - 45 daqiiqo
Ma taqaanaa qof dhawaan dhacay oo uu galay dhaawac culus? Baro sababta ay xirfad-yaqaanada bulshada u wada-shaqeynayaan si ay uga caawiyaan dadka waaweyn inay yareeyaan halista dhicitaankooda. Wax ka baro waxyaabaha halista u ah dhicitaanka sidoo kale talooyin iyo ilaha bulshada ee jira ee kaa caawin kara yareynta khatartaada.
Kordhinta Maskaxda - Fari tiirarkaaga qalin iyo Sii Maskaxdaada Darajada
Baro saamaynta ay ku leedahay caafimaadka maskaxda oo aad la kulanto dhawr, qaabab madadaalo oo aad uga doodi karto maskaxdaada oo aad u dhadhammi karto barnaamijyada kale ee caafimaadka maskaxda ee ADRC.
Ka Shaqee Maskaxda - Qaybta I
90 daqiiqo (1.5 saacadood)
Baadh oo kaqeybgal noocyo kaladuwan oo kaa caawin doona inaad ku mashquulsanaato, jimicsi sameysid, oo aad la tartanto xirfadahaaga xusuusta. Baro xoogaa jimicsi xiiso leh adigoo adeegsanaya qalin iyo warqad. Ugu badnaan 40 jir.
Ka shaqee Maskaxda - Qaybta II
Baro siyaabaha maskaxdaadu ugu sii fiicnaato: baro tiirarka si aad u fiicnaatid caafimaadka maskaxda, tijaabiso oo aad u tababarto maskaxdaada ciyaaro cusub oo caqabad ku ah maskaxda, jahliga indhaha, iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaa lagu bixiyaa jawi kooxeed yar. Baro xoogaa jimicsi xiiso leh adigoo adeegsanaya qalin iyo warqad. Ugu badnaan 40 jir.
Cun caafimaad - Waxbarashada nafaqada
Karinta Hal ama Laba
Karinta hal qof ama laba qof maahan inay adkaato ama dhib noqoto. Waxaad baran doontaa sida loo qorsheeyo cuntada usbuuca, talooyin ku saabsan dhimista cuntada, iyo sida looga faa'iideysto qaboojiyahaaga.
Karinta ku saabsan Miisaaniyadda
Ma waxaad dooneysaa inaad lacag keydiso? Baro siyaabaha loo cuno cunnooyinka macaan miisaaniyadda adoo diyaarinaya ka hor safarka dukaameysiga, sida loo dukaameysto caqliga, iyo sida looga faa'iideysto aaladaha jikada si lacag loo keydsado.
Ha u isticmaalin Koofi Sonkor ah - Horudhac Nolol Caafimaad qaba Aqoon-isweydaarsi Sonkorowga
Ma ku batay baaritaanka cudurka sonkorowga ka hor ama nooca sonkorowga 2? Soo qaado tusaalo sida aqoon isweydaarsiga Nolosha Caafimaadka leh ee Sonkorowgu uga caawiyo dadka waaweyn inay bartaan sida loo hagaajiyo maaraynta xaaladan.
Cunto loogu talagalay fikirka: Ciyaarta Jeopardy
Degdeg, madadaalo, iyo ciyaar is-dhexgal leh oo leh talooyin nafaqo leh oo waxtar leh.
Badbaadada Cuntada Guriga
15 & 30 daqiiqo
Sannad kasta, malaayiin dad ah ayaa qaata cudur ka dhasha cuntada. Waxaan daboolidoonaa tillaabooyinka aan kuqaadi doono jikadaada si loo yareeyo fursadahaaga jirro.
Nafaqada loogu talagalay Maskaxda Caafimaadka leh
Caafimaadka maskaxda waa muhiim, markaa maxaa diidaya inaad cuntid cunnooyinka ka hortagaya hoos u dhaca garashada. Soo ogow cuntooyinka sida gaarka ah muhiimka u ah si maskaxdaada looga ilaaliyo gabowga. Wax ka baro cunno loo sameeyay maskax caafimaad qabta iyo tilmaamo lagu dhexgalinayo noloshaada.
Organic iyo nonorganic
Waxaa jira jahwareer badan oo ku saabsan cuntooyinka dabiiciga ah. Baro waxa ay ku qaadaneyso cunnada in loo tixgeliyo mid dabiici ah iyo waxa laga raadinayo calaamadda. Soo ogow faa iidooyinka iyo qasaaraha soo iibsiga dabiiciga iyo kuwa aan dabiici ahayn.
Tusmooyinka markaad wax cunaysid
Mareykanku waxay jecel yihiin inay wax cunaan, laakiin tani waxay la macno noqon kartaa cabirro qayb deeqsinimo leh iyo tiro badan oo kalooriyaal iyo dufan ah. Baro talooyin ku saabsan sida loo akhriyo liiska makhaayadaha, cabbirka qaybta, iyo xulashooyinka macmacaanka.